ကြော်မယ် ကင်မယ် မုန့်ဖုတ်မယ်…. 🍗🍗🍗 – unique.com.mm
ကြော်မယ် ကင်မယ် မုန့်ဖုတ်မယ်…. 🍗🍗🍗
နို 02, 2020
ဝိတ်ချတဲ့ သူတွေ၊ အဆီထိန်းချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေတဲ့ Haier Air Fryer ကို ယူနစ်မှာဝယ်လို့ရနေပြီ…
● အရွယ်အစားအားဖြင့် လည်း Oven, Microwave တွေထက် အများကြီးသေးငယ်တာမို့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာနေရာသီးသန့်ပေးစရာမလိုဘဲ မီးပလပ်ထိုးလိုက်ပြီး အသုံးပြုချင်တဲ့ Temperature အပူချိန် ဒီဂရီ ကိုရွေးပြီး လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
● Air Fryer (လေပူသုံးအကြော်အိုး) လေးဟာဆိုရင်ဖြင့် ဆီသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ အသား၊ ငါး၊ အသီအရွက် များအားလုံးကို အကြော်၊ အကင်၊ ဖုတ်မျိုးစုံအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
● Air Fryer ဖြင့်ကြော်လှော်သော အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာ ဆီအသုံးပြုစရာမလိုတဲ့အပြင် အသား၊ ငါး ထဲမှာပါတဲ့ အဆီများကိုပါ ၈၀% လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
● ဒါ့ကြောင့် ဆီကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ အဝလွန်ခြင်း၊ အဆီပိတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချို စသည့် ရောဂါများကို လျော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချနေသူများအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုစေမယ့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
● အလုံပိတ် လေပူပေး အကြော်စက်ဖြစ်တာကြောင့် ညော်နံကြောင့်စိတ်ညစ်ရခြင်း ၊ ဆီများလွှင့်စင်မှုကြောင့် မီးဖိုချောင်ညစ်ပတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ညစ်ရခြင်းများ ကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူရန် Link ---> https://bit.ly/34NNaOb